မြားစှာသောချည်ခင်ကြိုပို့ Box ကိုပြေးဆွဲမှုမရှိစက် - တရုတ်များပြားချည်ခင်ကြိုပို့ Box ကိုပြေးဆွဲမှုမရှိစက်ပေးသွင်း,စက်ရုံ -FEIHU
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် >ကုန်ပစ္စည်း >ပြေးဆွဲမှုမရှိအကွေ့အကောက်များသော machine
မြားစှာသောချည်ခင်ကြိုပို့ Box ကိုပြေးဆွဲမှုမရှိစက်
နှစ်ဆစက်, ကအကွေ့အကောက်များသောနိုင်ပါတယ် 2-3 Fiber မျှင်၏သက်တမ်းထပ်တိုး, ချည်မျှင်, သိုးမွှေးမျှင်, FDY, polyester မျှင်နှင့်စသည်တို့ကို, က TFO လိမ်စက်ပြင်ဆင်နေများအတွက် Tube bobbins အတူတက်ယူနိုင်ပါသည်, လည်း အသုံးပြု. ယက်လုပ်ခြင်းစက်များအတွက် conical Cone အတူတက်ယူနိုင်ပါသည် . ဒါဟာအမြင့်စွမ်းရည်၏အင်္ဂါရပ်ရှိပြီးကောင်းစွာယူ-up, ချောပုံသဏ္ဍာန်, လာမယ့်အပြောင်းအလဲနဲ့အလုပျအတှကျအလုပျသမားမြား၏ပြင်းထန်မှုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်.
ပြေးဆွဲမှုမရှိနှစ်ဆချည်ခင်လွန်းသေတ္တာ စက်ယန္တရား, ကအကွေ့အကောက်များသောနိုင်ပါတယ် 2-3 Fiber မျှင်၏သက်တမ်းထပ်တိုး, ချည်မျှင်, သိုးမွှေးမျှင်, FDY, polyester မျှင်နှင့်စသည်တို့ကို, က TFO လိမ်စက်ပြင်ဆင်နေများအတွက် Tube bobbins အတူတက်ယူနိုင်ပါသည်, လည်း အသုံးပြု. ယက်လုပ်ခြင်းစက်များအတွက် conical Cone အတူတက်ယူနိုင်ပါသည် . ဒါဟာ၏အင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ် မြင့်သော ထိရောက်မှုနှင့်ကောင်းစွာယူ-up, ချောပုံသဏ္ဍာန်, လာမယ့်အပြောင်းအလဲနဲ့အလုပျအတှကျအလုပျသမားမြား၏ပြင်းထန်မှုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်.
24(6 ဗိုင်းလိပ်တံ / အုပ်စုတစ်စု)
ပြားချပ်ချပ် bobbin သို့မဟုတ်ကန်တော့ချွန်(optional ကို)
380V ကို 50HZ 3phase
မက်စ်. 1000 မီတာ / မိနစ်
ပြားချပ်ချပ် bobbin သို့မဟုတ်ကန်တော့ချွန် (optional ကို)
အော်တို Stop စက်ပစ္စည်း
motion sensor ကို
auto-မှားသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ် device ကို
air ကို Splicer
L ကို 1454 x ကဒဗလျူ 690 x က H ကို 1600 မီလီမီတာ
200ကီလိုဂရမ် / အုပ်စုတစ်စု
မေး: ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မဟုတ်ပါဘူး, သငျသညျအပေါငျးတို့သ Logistic အရာကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မယ်?
တစ်ဦးက: အတိအကျ. နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်ရေရှည်ပေးပို့ခဲ့သည်ဟုအပြည့်အဝပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်ပူးပေါင်း. သင်သာကိုဖြန့်ဝေသည့်ရက်စွဲအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်, ပြီးနောက်သင်ရုံး / အိမ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. သည်အခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာ.
မေး: ဘယ်လောက်ကြာထုတ်လုပ်မှုများအတွက် ?
လွန်ခဲ့သော : စက်နှစ်ဆချည်ခင်ကြိုပို့ Box ကို
နောက်တစ်ခု : ဓာတု Fiber စည်ပြေးဆွဲမှုမရှိစက်အကွေ့အကောက်များသော